FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AMERIKANA STAFFORDSHIRE TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika amerikana Staffordshire Terrier
'Ity i Mana! Nanavotra azy aho nandritra ny 10 volana. Herintaona sy tapany izy izao. Orona manga Amerikana Staffordshire Terrier milanja 60lbs ary mijoro 19 santimetatra ny halavany. Tsy inona izy fa bibikely fitiavana te hilelaka sy hilalao foana! Karazana / karazany tsy takatra toy izany. '
Lisitry ny Amerikanina Staffordshire Terrier Mix Dogs
Ny American Staffordshire Terrier (Am Staff) dia matanjaka tokoa amin'ny habeny. Mailaka, be hozatra ary be volo misy loha malalaka sy matanjaka. Somary lava ny savony ary boribory eo amin'ny ilany ambony mba hianjera tampoka eo ambanin'ny maso. Maizina sy boribory ny maso, ambany ambany ao amin'ny karan-doha sy mipetraka lavitra. Ny hodi-maso mavokely dia heverina ho lesoka araka ny fenitry ny AKC. Mahery be ny valanoranony. Ny molotra dia tokony ho akaiky ary na dia tsy misy looseness na dewlap aza. Ny sofina dia apetraka ambony loha ary azo heverina na tsy voakapa. Aleo tsy voakapa ary tokony ho fohy sy tazomina voninkazo na antsasaky ny prick. Ny nify dia tokony mamorona manaikitra hety. Ny palitaony dia vita amin'ny volo matevina, henjana ary manjelatra. Ny loko, solid, parti, na patched rehetra dia azo ekena, fa raha ny fenitra AKC dia tsy ampirisihina ho fotsy mihoatra ny 80% ny alika. Ny rambony tsy misy dock dia fohy raha oharina amin'ny haben'ny alika sy ny tapers amin'ny teboka iray. Navoakan'ny AKC ho 'American Staffordshire Terrier' ary UKC ho 'American Pit Bull Terrier', ny American Staffordshire Terrier dia mazàna manana firafitry ny taolana lehibe kokoa, habe ary lanjany avy eo ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy American Pit Bull Terrier.
Ny Amerikanina Staffordshire Terrier dia alika manan-tsaina, falifaly, tia olona, ​​azo antoka ary matoky tena. Malemy fanahy sy be fitiavana amin'ny olona izy io, dia biby fiompy tsara toetra, mahatsikaiky, mahatoky sy be fitiavana. Tsara ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe izany. Saika mankatò foana, tsy mila zavatra hafa io alika io fa ny hampifaly ny tompony fotsiny. Alika mpiambina be herim-po sy manan-tsaina izay feno fiainana. Nandritra izay 50 taona lasa izay, ny fiompiana am-pitandremana dia namokatra ity alika sariaka sy mendri-pitokisana ity, izay alika tsara indrindra ho an'ny ankizy. Be herim-po ary mpiady maharitra raha tezitra. Tena miaro ny tompony sy ny fananan'ny tompony izy io, hiady amin'ny fahavalo mandra-pahafatiny raha mamandrika ny alika eo an-joron-trano ny fahavalo ary mandrahona ireo olon-tiany. Ity karazana ity dia manana fandeferana avo tokoa amin'ny fanaintainana. SASANY tsy ifaneraserana Ny mpiasa dia mety ho mahery setra amin'ny alika. Mifanerasera tanteraka rehefa tanora mba hanakanana ny fironana mahery setra alika. Ity karazana ity dia mety sarotra vaky trano . Izy io dia nanome valiny miavaka amin'ny maha-mpiambina ny fananana azy, nefa kosa dia raisina ho toy ny alika mpiara-miasa. Rehefa voaofana tsara sy ifaneraserana araka ny tokony ho izy ny mpiara-miasa dia manao namana mpiara-mivavaka be. Ity karazany ity dia tsy natao ho an'ny tompon'olon-tsotra izay tsy mahatakatra fa ny alika rehetra dia manana instinct hanana baiko. Mila tompona matanjaka sy matoky tena ary tsy miovaova izy ireo izay mahatakatra ny fomba fanehoana ny fitarihana mety. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa ao ambanin'ny tsipika mpitarika tokana ary voafaritra mazava tsara. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Haavony: Lehilahy 17 - 19 santimetatra (43 - 48 cm) Vavy 16 - 18 santimetatra (41 - 46 cm)
Lanja: 57 - 67 pounds (25 - 30 kg)
Ny sasany dia mora mimonomonona amin'ny fo, olan'ny tiroid, aretin-koditra, fivontosana, lalan-dra, hipopotama ary aretim-po miteraka. Ataxia koa, izay olana ara-pahasalamana lehibe indrindra amin'ny karazany. Misy fitsapana voajanahary ho an'ny ataxia amin'ny alàlan'ny orinasa antsoina hoe Optigen. Raha mitady AmStaff ianao dia hendry ny manontany amin'ny mpiompy raha omena toky fa tsy misy ataxia na tsia ny zanany. Toetra iray miverimberina izy io, ka raha ray aman-dreny 1 no nozahan-toetra tsara Ataxia dia azon'izy ireo antoka fa tsy ho voan'ny aretina ilay alikakely.
Staffordshire Terriers dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokontany. Aleon'ity karazana ity ny toetr'andro mafana.
Ny fanazaran-tena isan'andro no zava-dehibe indrindra. Raha tsy misy izany dia ho lasa sarotra ny mandray an-tanana ny Amerikana Staffordshire Terrier. Mila entina izy ireo mandeha lava isan'andro / fihazakazahana na mihazakazaka. Na dia mivoaka an-tongotra aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia tokony ho olombelona. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana sy ny vavahady aorian'ny olombelona.
9-15 taona eo ho eo
Alikan-jaza 5 - 10 alika kely
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Borosio matetika amin'ny borosy mafy volo, ary araho amin'ny shampooing na maina maina raha ilaina izany. Ny fikosehana amin'ny lamba famaohana na chamois no hampamirapiratra ny palitao. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tany amin'ny faritra anglisy an'ny Staffordshire, ny fiampitana teo amin'ny Bulldog sy ireo faritra samihafa dia namolavola ny hozatra, mavitrika ary tia ady Staffordshire Bullterrier . Nentina tany Etazonia, ny karazana dia tian'ny mpiompy amerikana izay nampitombo ny lanjany ary nanome azy lohany matanjaka kokoa. Ankehitriny dia ekena ho karazany misaraka, ny Staffordshire amerikana dia lehibe kokoa sy mavesatra noho ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy anglisy, Staffordshire Bull Terrier. Taorian'ny fandrarana ny ady amin'ny alika tany Etazonia tamin'ny taona 1900, dia namboarina ny karazana roa tamin'ireo alika ireo, ny fihenan'ny fampisehoana ary ny tsy fisehosehoana. Ny fihenan'ny fampisehoana dia nantsoina hoe American Staffordshire, raha ny soritry ny alika tsy fampisehoana kosa dia ny American Pit Bull Terrier . Ankehitriny dia ekena ho karazany misaraka izy roa. Androany ny Amerikanina Pit Bull Terrier dia nobeazina tamina toetra malemy mitovy amin'ny American Staffordshire Terrier. Samy manao biby fiompy tsara izy ireo miaraka amin'ny karazana tompony. Ny American Staffordshire Terrier dia neken'ny AKC tamin'ny 1936. Ny sasany amin'ireo talenta amerikanina Staffordshire Terrier dia mpiambina, mpiambina, asan'ny polisy, fisintomana lanja ary hakingana.
Mpangalatra volamena an'i Gaff, brindle mainty amerikana Staffordshire Terrier an'ny MBF AmStaffs
Cash, Amerikana Staffordshire Terrier amerikana 1 taona mihazakazaka amin'ny hatsaran-tarehy sy ny tanjaka
Cash, Amerikana Staffordshire Terrier Amerikana iray taona
Roa-Tone sy ny rahalahiny Mercury tamin'ny folo volana, sary natolotry ny MBF AmStaffs
'Ity no Chance brindle orona manga amin'ny faha-3 taonany. An'i Michelle fofom-badiko izy. Izy dia ilay badin'ny trano miaraka amin'ny angovo sy fitiavana tsy manam-petra. Izy dia Animal Emotional Support Animal (ESA) voasoratra anarana. '
Tombontsoa ny brindle-orona manga Amerikanina Staffordshire Terrier amin'ny faha-3 taonany.
Hijery ohatra misimisy momba ny American Staffordshire Terrier
Sary amerikana Staffordshire Terrier amerikana 1
Sary Amerikanina Staffordshire Terrier 2
American Staffordshire Terrier Sary 3
sisin-collie laboratoara Mix alika
chihuahua rat terrier mifangaro alika kely